ICJ oo ku dhawaaqday waqtiga dhageysiga dacwada badda | KEYDMEDIA ONLINE
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ ayaa sheegtay in waqtigii loo madlanaa ay dhaceyso dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
THE HAGUE - Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in Dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay dhacayso 15 March oo ah xilligii la qorsheeyay.
Hoolka The Peace Palace ee Hague ayaa la isgu tagi doonaa 15-ka bishaan, saacaddu markay tahay 3:00PM, Waxaana xaadiri doona xubno ka tirsan Garsoorayaasha Maxkamadda, halka inta kalana ay Video uga qayb gali doonaan.
Wakiiladda dhinacyadda Dacwadda u dhaxayso waxay iyaguna noqon karaan Goobjoog ama Video ayeey uga qayb gali karaan.
Maxkamadda ayaa Hore u sheegtay in dhagaysiga kiiskaasan uusan dhaafi doonin taariikhda loo asteeyay kadib markii Kenya isku dayday in ay dib u dhigto markii Afraad.
Waxaa sidoo kale qoraalka lagu xusay in faahfaahinta jadwalka dhagaysiga oo dhammaystiran gadaal laga soo sheego doono.